China Masinina milina fanaovana maska ​​ho an'ny ankizy sy mpanamboatra | Sanying
Na ara-pitsaboana ilay sarontava dia tsy misy ifandraisany amin'ilay masinina. Ny sarontava novokarin'ity fitaovana ity dia azo ampiasaina ho saron-tava fandidiana raha mbola mivoaka ny otrikaretina. Ity milina ity dia mandray fanaraha-maso ny efijery PLC. Ny fehikibo tena lehibe dia entin'ny motera mandeha irery, avadika ilay motera mandeha, marina ny fandefasana, miorina tsara ny fanaraha-maso ary azo ovaina ny hafainganana
Fitaovana fampitaovana ：
1 is Ny valin'ny welding dia tsara ary ambany ny tahan'ny tsy fahombiazana;
2 is Haingam-pandeha ny hafainganam-pamokarana, misy takelaka 80-100 isa-minitra, izay azo hamokarana maharitra mandritra ny 24 ora;
3, fanaraha-maso programa PLC solosaina, servo drive, automatique avo lenta;
4, interface tsara amin'ny milina lehilahy, fitaovana tsy mahazatra ary fanairana tsy fahampiana, fitarihana ny efijery hiatrehana haingana ny tsy ara-dalàna.
Anaran'ny vokatra milina fanaovana maska ​​ho an'ny ankizy mandeha ho azy Haben'ny fitaovana L3600xW3500XH2000 (MG)
Model modely SYK-650B tsindry 5 ~ 8kg / cm²
Famatsiana herinaratra miasa
Herin'ny fitaovana 2700W
fahombiazan'ny famokarana 50 ~ 70pcs / min Lanjan'ny fitaovana ≤3000kgManodidina ny ≤ 3000kg
Lisitry ny akanjo anaovan'ny mahazatra
Tetezana mpanapaka orona
1 3 volana
2 3 volana
Lug welding vy
4 3 volana
2 6 volana
Fehikibo finday fehikibo Hummer
3 3 volana
CKD, SMC / Japana, Yadeke, Qilike / Taiwan
CKD, SMC / Japana, Yadeke
NSK / Japana, NTN
Fampidirana ny mpanitsy (tsy voatery)
Ny milina fantsom-panafody dia rafitra fanitsiana servo ampiasain'ny efijery feno fahombiazana avo lenta. Ampiasaina manokana izy io hanarahana ny sisin'ny fitaovana, ny tsipika ary ny ambaratonga mifanohitra. Mety amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy ny fanitsiana ny fiviliana eo amin'ny fitaovana mihodina. Ny fihanaky ny fitaovana dia mikajiana amin'ny sensor ultrasonic, infrared ary CCD, ary ny valiny dia atosiky ny valiny. Ny motera sy ny kaody momba ny kaody dia ampiasaina hanitsiana ireo fitaovana offset marina, izay ampiasaina indrindra amin'ny tsipika famokarana napkin-damba tsy misy tenona, fanontana flexo, fanamboarana kitapo ary indostria hafa.
Fianarana samirery 1.servomotor: atombohy aloha ho ao anaty fanjakana ny masinina, kitiho ny maody "masontsivana fametrahan'ny masontsivana rafitra" ho an'ny masontsivana rafitra hametrahana ny tena interface, tsindrio "bokotra fanondroana otrikaretina mandeha ho azy" manomboka amin'ny fianarana. Ny motera dia hihazakazaka sy miverina, ary mianatra ny enta-mavesatra sy ny kapoka mandeha ho azy, mba hahazoana ny fanjakana miasa tsara indrindra. Aorian'ny fahavitanana dia hiverina amin'ny fanjakana "manual" ny mpanara-maso.
2.manual press press "havia", hanitsy ny fiviliana hihetsika ankavia, tsindrio ny bokotra "havanana", hanitsiana ny fiviliana hihetsika havanana, raha misy ny lalana mifanohitra amin'izany, dia afaka manery "ny masontsivana rafitra hametraka fanalahidy" lakile hiditra ao amin'ny "system parameter setting master interface ", kitiho ny" bokotra napetraka amin'ny motera "hanohizana ny fanovana ny làlan-tànana, avy eo tsindrio ny" bokotra fametrahana fivoahana "hialana, Avy eo nivadika ny torolàlana.
3.fidio ny fanjakana "fanitsiana mandeha ho azy", fantaro raha marina ny lalana mandeha ho azy, raha mifanohitra amin'izay ny làlana, avadiho amin'ny fanjakana "fanitsiana tanana", araka ny "setran'ny motera mandeha ho azy" hovana ny lalana mandeha ho azy.
4. Ity rafitra fanitsiana dingana ity dia afaka mihazakazaka ara-dalàna, ny fanjakana "fanitsiana an-tanana" dia azo apetraka amin'ny "paramètre system hanodina ny bokotra" mankany amin'ny "interface parameter setting master master". Ny masontsivana mifanaraka amin'izany dia azo ahitsy, ary ny fanitsiana ny fahatsapana amin'ny ankapobeny dia tsy asaina lehibe loatra na kely loatra.
1 Mijanona tsy mihetsika ara-materialy: Ity fiasa ity dia ao amin'ny fanjakana "mandeha ho azy". Rehefa tapaka tampoka ilay fitaovana na vita ilay izy dia tsy hihazakazaka hatramin'ny farany hatramin'ny farany ny fanitsiana fa hahemotra mandritra ny fotoana fohy (azo apetraka ny fotoana fanemorana). Ny interface setting setting dia napetraka amin'ny "On" rehefa tapaka ny fitaovana.
Fanaraha-maso ivelany 2: ity fampiasa ity dia mifehy ny "mandeha ho azy" sy ny "manual" mifamadika amin'ny alàlan'ny signal ivelany, rehefa "auto" sy "COM" dia mifandray fohy, Switch to "automatique" ary avadika "manual" rehefa tapaka. Io fampiasa io dia ahafahana manitsy ny fanitsiana izay mety hiova ho "mandeha ho azy" rehefa mandeha ilay fitaovana, mijanona tsy mifindra amin'ny "manual" intsony ary lasa manan-tsaina kokoa. Ity fampiasa ity dia mila fehezina ivelany amin'ny interface interface lavitra.
Fivoahana fanairana 3: ity fiasa ity dia amin'ny fanitsiana ny fisian'ny fetra, ny fihoaram-pefy, ny toe-javatra ankehitriny sy ny hafa, hakatona ny fampitana mba hanomezana famantarana mijanona amin'ny ivelany.
Fahadisoana mahazatra ao amin'ny Fanazavana Fanampiny sy ny Vahaolana
1.Tsy misy taratra aorian'ny famatsiana herinaratra, ary tsy mazava ny fampisehoana Jereo fa ara-dalàna ny fivoahan'ny herinaratra DC24V, zahao raha tsara ny tariby misy herinaratra, raha mifandray tsara ny tady herinaratra, na ny marina ny fifandraisana na tsia, ary apetaho indray.
2.Ny drive dia tsy afaka mametra ny toerany
1) .zahao raha marina ny fifandraisana ary mifandray tsara ny mpiray dia alao ary sintomy indray
2) .Raha ny "bokotra switch setting parameter parameter", ny mode fanitsiana manual dia nafindra tao amin'ny interface parameter izay mametraka ny interface interface ary tsindrio "lakilen'ny fidirana hozatra mandeha ho azy" hanombohana fianarana samirery. Ny motera servo dia mianatra samirery. Hitandrina raha misy fiovana amin'ny sandan'ny tabilao fisehon'ny toerana misy ny maotera.
3.tsy mandeha ny fiara
1) .zahao raha madiodio ilay vongana na pulley synchronous na tapaka ny fehikibo
2) .Saraho ny fiara avy eo amin'ny talantalana ary zahao raha mikatona ny ampahany mekanika na tsy ampy ny fanosehana fiara.
4. Miasa tanana sy mandeha ho azy amin'ny lalana iray ihany ny fiara
1) .Zahao raha marina ny tariby sensor.
2). Ampiasao ny fitaovana hanakanana ny sensor mba hahitana raha afaka manova ny lalana ianao, raha azonao atao dia ho ara-dalàna ny polarity switch
3) .Zahao raha zahana na tapaka ny tsipika sensor.
4) .Hamarino raha marina ny safidin'ny sensor?
Ny ultrasonic AE-210 dia mety amin'ny fitaovana rehetra tsy misy harato
Ny infrared AE-100 dia mety amin'ny fitaovana misy harato (mariho fa tsy azo apetraka amin'ny tara-masoandro mivantana)
Ny fenitra miloko optoelectronic AE-90 dia mety amin'ny fanarahana loko amin'ny fitaovana haingam-pandeha
Ny sary CCD AE-400 dia mety amin'ny fitaovana afovoany sy haingam-pandeha, toy ny sisiny, tsipika, loko sns.
5) .Ditter an'ny jitter dia be loatra. Fomba fanodinana: mihena ny sandan'ny tombam-bidy amin'ny interface interface.
5 Ny famerenana amin'ny laoniny dia mihetsiketsika be na tsy misy dikany: jereo raha solafaka amin'ny horonan-taratasy ilay fitaovana, afaka mampitombo ny fihenjanana na mampitombo ny fikorontanan'ny horonan-taratasy; azo ahitsy ny tombony; sensor dia mety ho akaiky araka izay azo atao amin'ny horonan-tsipika; Zahao ny elanelana misy eo amin'ny mpamily sy ny ampahany mekanika.
6.Ny mainframe fitaovana dia tsy mandeha tsara rehefa tsy manomboka ary tsy afaka miasa aorian'ny fanombohana
1) .Fahazavana sensor an'ny fanjakana, fampiviliana fitaovana amin'ny mpanara-maso, fiakaran'ny vidin'ny bara
2). zahao raha misy loharanom-panelingelenana herinaratra mahery eo akaikin'ny mpanara-maso sy sensor, atokàny ary averina fanandramana
3). Ampifandraiso amin'ny fitaovana tariby ity vokatra ity
4) .Zahao raha manodidina ny tariby sy tariby mitondra ny tariby môtô be herinaratra, azafady mba saraho ny fitsapana
5) .Hamarino raha tapaka ny rubber na nifandray ratsy ny tariby
6.) heck raha V- sy PE dia faritra fohy
7.Matetika electrostatic lehibe indrindra: sensor sy mpanaraha-maso tariby tsirairay avy amin'ny tany, sensor hatr'izay mety hipetraka eo afovoan'ny fitaovana, tsara indrindra ny manampy fitaovana famongorana electrostatic
Previous: Masinina sarom-bava gana
Manaraka: Function sy toetra mampiavaka ny masinina saron-trondro
Lamba matevina manohitra ny statika, Mpanamboatra sarontava, Kitapo bubble fonosana, Masinina saron-tava iray Drag Drag, Masinina saron-tarehy, Lamba mena,